Walug of Lugo को माध्यमबाट पैदल यात्रा यात्रा समाचार
La धेरै नोबल र लुगोको वफादार शहर यो स्पेनको उही नामको प्रान्तको राजधानी हो। यो एक हो रोमन मूलका साथ स्पेनिश शहरहरू किनकि यो २ BC ईसापूर्वमा स्थापना गरिएको हो, यसले गालिसियालाई पनि पूर्वानुमान गर्दछ, र यदि तपाईंले भ्रमण गर्नुभयो भने तपाईंले यो शहर यहाँ छोड्नुभएको अवशेषहरू देख्नुहुनेछ।
Lugo को सबै भन्दा विशेष पुरातात्विक खजाना मध्ये एक यसको पर्खाल हो। प्रसिद्ध Lugo भित्ता यो एक चमत्कार हो र २००० पछि यसले यसको शीर्षक हो विश्व सम्पदा। अब जब इस्टरको लागि केहि दिनको छुट्टी आउँदैछ, उसलाई कसरी चिन्ने?
2 Lugo को पर्खाल
3 के Lugo को भोल मा यात्रा गर्ने
शहर मीनो नदीको बीचमा भएको पहाडको शीर्षमा छ। यो रोमी अभियानका समूहले स्थापना गरेको हो जुन ईसापूर्व २ 25 ईसापूर्वमा आइपुगे र त्यसपछि यसको नाममा बप्‍तिस्मा लिए लुकस औगुस्ती। यो विचार प्रायद्वीपको उत्तरपश्चिमी राज्यलाई जोड्न थियो र पछि सैनिक फोर्टको रूपमा पहिलो जन्म भएको हो, करिब २ twenty वर्ष पछि यसको विस्तार भई विस्तार भइसकेको थियो जहाँ मन्दिरहरू, तातो स्प्रि ,हरू, सडकहरू र अन्यहरूसहितको शहरको रूप लिइसकेको थियो।
यो २ 260० र 325२2266 को बीचमा हो कि शहर घेरा वरिपरि २२ meters meters मिटर लामो पर्खालले घेरिएको थियो। सत्य यो हो कि यो अद्भुत छ किनभने यो संसारमा एकमात्र रोमी किल्ला हो जुन हाम्रो सम्पूर्ण दिनहरूमा पुगेको छ। हो, यो यसको मूल आयाम मा अक्षुण्ण छ।
तपाईं रोड बाट Lugo जान सक्नुहुनेछ, मैड्रिडबाट La Coruña सम्म N-VI मार्फत र त्यसपछि ट्रेन प्रयोग गर्नुहोस्।
Lugo को पर्खाल
हामीले माथि भनेझैं, भित्ता एकदम फराकिलो छ र यो २२2256 मिटर लामो छ। यो संग Might 85 शक्तिशाली टावरहरू र यो मूल दुर्ग र यसको वरपरको बीच एक रक्षा प्रणालीको रूपमा जन्म भएको थियो। डिस्पोज कुल १० ढोका जुन बाहिरी भागको साथ भित्री भागमा जोडिन्छ र यसको पुरानो पदयात्रा वा वाकवे आज लोकप्रिय गल्ली हो।
यो कहिले पनि परिमार्जन गरिएको छैन वा यसको धेरै लामो इतिहासमा परिवर्तन भयो तर सौभाग्यले यी परिवर्तनहरूले यसलाई खासै परिवर्तन गरेन र यसले अझै वास्तुकार भिटुरिओको हस्ताक्षर रहेको छ: पर्खालको चौडाई,, २० मिटर छ र केहि स्थानहरूमा यो सात मिटर पुग्न; दुई किलोमिटर भन्दा अधिक लम्बाई र कूल around 34 हेक्टर।
खण्ड र पर्खाल को खण्ड बीच, पर्दा भनिन्छ (छ मीटर र एक शिखर र तेह्र साढे मिटर बीच), त्यहाँ एक टावर छ र यद्यपि यो ज्ञात छ कि मूल रूपमा त्यहाँ 80० भन्दा बढी थिए, आज त्यहाँ whole and पूरा र अन्यको छ त्यहाँ अझै राम्रो वा नराम्रो संरक्षित अवशेषहरू छन्।
यी टावरहरू आठ, नौ-ओडित मिटर उचाई र १ 16 भन्दा बढीसम्म छन्। ती मध्ये एउटा अर्ध गोलाकार विन्डोज छ जुन एक मिटर भन्दा बढि चौडा र अग्लो छ। ह्यान्डसम ती मध्ये 60० गोल टावर र ११ वर्ग हो। दुवै भित्ता र टावरहरू तिनीहरू ग्रेनाइटको साथ निर्मित छन् जहाँ ढोका र कुनाहरूमा स्लेट स्ल्याबहरू छन्। आन्तरिक भाग मोर्टारबाट बनेको छ, ढुb्गा, ढु stones्गा र पृथ्वीको एक मिश्रण।
मूल रूपमा लुगोको भित्तामा पाँच ढोका थिए (रोमन समयमा), शहर मा प्रत्येक मुख्य पूर्णता को लागी एक, तर मध्य उन्नीसौं शताब्दी र बीसौं शताब्दीको पहिलो बीस वर्ष को बीच पाँच थप खोलियो। त्यस कुल दस ढोकामध्ये आज चारवटा सवारी साधनको लागि र छ वटा यात्रीहरूको लागि छ। मूल काठका ढोकाहरू १ th औं शताब्दीको मध्यसम्म बचाए तर त्यो शताब्दीको s० को दशकमा तिनीहरू हराए।
के Lugo को भोल मा यात्रा गर्ने
तिनीहरूको ढोका। हो नक्कली पोर्टापुरानो Porta डेल Boquete, मूल रोमन। यो .5..65 मिटर अग्लो र3मिटर चौडा छ। को सैन फ्रांसिस्को गेट यो अझ आधुनिक छ र १ 1858 XNUMX मा स्पेनको इसाबेल द्वितीयले उद्घाटन गरेका थिए। यो थियो राजकुमार ढोका २० औं शताब्दीको s० को दशक सम्म यो सुधार गरिएको थियो यसलाई व्यापक बनाउँदै। आज यो १२..60 मिटर अग्लो र .12.। मिटर चौडा छ। मानिस र कारहरु बितेर जान्छन्।
La स्टेशन गेट सन् १1875 मा ट्रेन लुगो आइपुग्दा यो खोलिएको थियो। केहि समय पछि दुईवटा टावरहरू ढल्दै यो ठूलो भयो। १ 1921 २१ मा यो ध्वस्त पारियो र आज तपाईले देख्नुहुने आठ चौडाई १० चौडाईमा बनेको थियो। को सान पेड्रो गेट यो मध्यकालीन समयमा थियो Sancti पेट्री गेट र सडकमा पहुँच प्रदान गर्‍यो जुन कास्टाइलमा पुर्‍यायो। यहाँ प्रसिद्ध क्यामिनो डे स्यान्टियागो लुगोमा प्रवेश गर्दछन्, यसको,,।4मीटर उचाई र,, wide० चौडाईको साथ। यसका प्रत्येक पट्टि दुईवटा ठुलो टावरहरू छन् र यस शहरको हतियारको कोट छ।
La स्यान्टियागोको पोर्टा यो रोमन कालको हो, यद्यपि १ XNUMX औं शताब्दीमा यसलाई पुनर्निर्माण गरियो ताकि गाडीहरू पार गर्न सकून्। त्यसोभए यसलाई स्यान्टियागो मटामोरोजको छविले सजाइएको थियो र लामो समयको लागि यो धार्मिकको लागि मात्र विशेष थियो। को विशप Aguirre गेट यो १ th औं शताब्दीको अन्ततिर सेमिनरीलाई कब्रिस्तानसँग जडान गर्नको लागि निर्माण गरिएको हो। यसमा रोमन मर्मतस्थलहरू सहित दुई टावरहरू ध्वस्त पारिएको थियो।
La पोर्टा मिना यो रोमन हो र यो लगभग मूल ढोका हो। यो3मिटर चौडा छ र आज मिओ नदीमा पहुँच प्रदान गर्दछ। यसमा दुई टावर र गार्डहरूको लागि कोठा छ। को बाँया बिशपको गेट प्रसिद्ध छ जेल ढोका किनकि यसले १ to direct1888 मा जेलमा सिधा पहुँचका लागि अनुमति दियो। अन्तमा त्यहाँ छ विशप ओडारियो गेट र पोर्टा नोभा.
Lugo को भित्ता पनि सीढी छ जुन पासेओ डे रोन्डा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, आज धेरै पर्यटन पैदल यात्रा। सिढीहरू भित्ताहरूमा इम्बेड गरिएको छ र यद्यपि ती सम्पूर्णतामा सुरक्षित गरिएको छैन, यो देख्न सकिन्छ कि ती डबल थिए। तिनीहरू २० औं शताब्दीको s० को दशकमा देखा पर्‍यो, धुलो र फोहोरले ढाकिएको, र यो प्रत्येक टावरमा कम्तिमा एउटा सीढी रहेको विश्वास गरिन्छ। तिनीहरूले भुइँमा छोएनन् तर पहिलो चरणमा पुग्न यो चलिरहेको भर्या ladबाट सिक्नु आवश्यक पर्‍यो, हमला हुने स्थितिमा पर्खाललाई अलग गर्न सक्ने सुरक्षा उपाय।
आज भित्ताहरू र र्‍याम्पको लागि बाहिरी सीढीहरू छन्। तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ खुन, टावरहरूको बाटोबाट पाँच मिटरको दूरीमा, २० मिटर चौडा र चार मिटर गहिरो। आज यो कुनै पनि हिसाबले पूर्ण छैन, केवल सम्पत्ति मात्र बाँकी छ, तर पुरातत्वविद्हरूले यसको नाप निर्धारण गर्न सक्षम भएका छन् र स्थापित गर्छन् कि यो एक निरन्तर खाडल होइन बरु स्वतन्त्र वर्गहरू थिए।
लुगो शहरले पैदल मार्ग, ढोका र भित्ताको भित्री भागको भ्रमण गर्दछ। रमाइलो गर्न!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » सप्ताहन्त » Lugo को भित्ताको माध्यमबाट पैदल यात्रा